နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၂၅) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on February 17, 2015 at 11:48 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီနေ့ အပိုင်း (၂၅) မှာတော့ ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့ အချိန်မှာ သုံးနိုင်တဲ့ အသုံးအနှုန်းများကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Saleslady : Can I help you?
Gloria : Yes, I’m looking forapair of white gloves. I think I wear size six.
Saleslady : The white gloves are on this counter. Let’s see… here’sasize six. These are very nice, and they’re washable, too.
Gloria : Oh, I’ll try them on. Hmmm……… they seem to fit. How much are they?
Saleslady : Five dollars.
Gloria : All right. I’ll take them.
Saleslady : That’ll be five-twenty with the tax.
အပေါ်က စကားပြောထဲက မှတ်သားဖွယ်ရာများကို လေ့လာရအောင်။
ဈေးရောင်းတဲ့ အခါ၊ ကုန်တိုက်တွေမှာ အရောင်းကောင်တာက salesclerk ခေါ်တဲ့ ဈေးရောင်းသူတွေဟာ ဝယ်သူလာရင် Can I help you? ဒါမှမဟုတ် May I help you? စသည်ဖြင့်မေးပြီး အကူအညီပေးရပါတယ်။ ဗဟုသုတ အနေနဲ့ပြောရရင် အမျိုးသမီးများဟာ အများအားဖြင့် ဆိုဒ် ၆ နှင့် ၈ ကြား လက်အိတ် ကိုဝတ်လေ့ရှိပါတယ်။ လက်အိတ်တွေဟာလည်း quarter size တွေနဲ့ (6,6¼ ,6½ ,6¾ ) စသဖြင့် ရှိပါတယ်။
The white gloves are on this counter.
ဒီစကားကို saleslady ကပြောတဲ့ပုံစံနဲ့ မိမိကိုယ်တိုင် white နဲ့ this အပေါ် stress ထဲ့ပြီး ဆိုကြည့်ပါ။ Saleslady က အဖြူရောင် လတ်အိတ်ကို အခြားအရောင်တွေကနေ ခွဲခြား နှိုင်းယှဉ်ပြောနေတာကို ကြားရပါမယ်။
တစ်စုံတစ်ရောက်က တစ်ခုခုကို ကြည့်ရင်းနဲ့ရွေးချယ် နေတဲ့အခါတို့၊ စဉ်းစားနေတဲ့အခါတို့၊ တစ်ခုခုကို ရှာနေတဲ့အခါတို့ မှာ ဒီလိုမျိုး Let's see… ကို တစ်လုံးချင်းပြောတယ်။ အဓိပ္ပါယ် မည်မည်ရရ မရှိပါဘူး။
I’ll try them on.
Try on ဆိုတာ two word verb (try + on) ဖြစ်ပြီး စမ်းဝတ်ကြည့်မယ် လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ အဝတ်ဆိုင် ဖိနပ်ဆိုင် တွေ မှာ ဝယ်သူတွေက စမ်းဝတ်ကြည့်မယ် လို့ပြောရင် I'll try them on. လို့ပြောကြတယ်။
ဒီမေးခွန်းမှာ primary sentence stress ကို 'are' အပေါ်မှာ ထည့်ပြောရတယ်။ လက်အိပ်အဖြူတွေက (တစ်ခြားအရောင်တွေ မဟုတ်ဘဲ) ဘယ်လောက်လဲဆိုတာကို သိချင်လို့ မေးတာ။
Five-twenty = five dollars and twenty cents ($5.20)
ငွေကြေးကို ပြောတဲ့အခါ ယူနစ်တွေကို ထည့်မပြောဘဲ သဘာဝကျကျ ဂဏန်းတွေချည်း ပြောရတယ်။
Permalink Reply by rosy on February 17, 2015 at 12:09
Permalink Reply by Ei Kay on February 17, 2015 at 12:11
I take copy of lessons.
Permalink Reply by Biak Lian Cung on February 17, 2015 at 14:07
Permalink Reply by Sai Kaél Lyle on February 17, 2015 at 19:53
I try them on!
Permalink Reply by KYAW TINT on February 19, 2015 at 7:33
Permalink Reply by ko kyawswar on February 24, 2015 at 22:54